Studio FAMU သည် Remote Access နှင့် Content Preservation များအတွက် Quantum Solution ကိုအသုံးပြုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Studio FAMU သည် Remant Access နှင့် Content Preservation များအတွက် Quantum Solution ကိုအသုံးပြုသည်
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား။ - စက်တင်ဘာ 15, 2020 - ကွမ်တမ် Corp. (NASDAQ: QMCO) သည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖြေရှင်းနည်းများတွင်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ စတူဒီယို FAMU သည် ကွမ်တမ် ပါဝင်သည်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက် ကွမ်တမ် StorNext®အရွယ်အစားဖိုင်သိမ်းဆည်းခြင်း၊ က Scalarတိပ်ခွေ archive နှင့်ဘက်ပေါင်းစုံမီဒီယာစာကြည့်တိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု။ ၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းသည်အရွယ်အစားကြီးမား။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသည့်သိုလှောင်မှုဖြစ်ပြီးဖိုင်များကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ဝေးဝေးသွားနိုင်ခြင်းဖြင့်ကျောင်းသား၏အလုပ်ကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ အဆိုပါအကောင်အထည်ဖော်မှု၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည် ကွမ်တမ်ဗီဒီယိုသိုလှောင်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
"ဒီ ကွမ်တမ် StorNext ဖြေရှင်းချက်သည်သိုလှောင်မှုကိုဗဟိုပြုရန်၊ ဖိုင်များကိုလွယ်ကူစွာ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်နှင့်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သိုလှောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်စည်းကမ်းအချို့ကိုပြenfor္ဌာန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်” ဟုစတူဒီယို FAMU မှဒါရိုက်တာOndřejŠejnohaကပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောရုပ်ရှင်ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Studio FAMU သည်အနုပညာအကယ်ဒမီ (FAMU) ရှိချက်သမ္မတနိုင်ငံရုပ်ရှင်နှင့်တီဗွီကျောင်းတွင်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပညာရေးကိုထောက်ပံ့ရန်ကျယ်ပြန့်သောရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလွန်အရင်းအမြစ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ကျောင်းသည်စာသင်နှစ်တစ်နှစ်စီထုတ်လုပ်သည့်အတန်း ၄၅၀ ခန့်နှင့်အကြီးစားရုပ်ရှင်စီမံကိန်းများအတွက်ဗီဒီယိုသိုလှောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည် ဒီစီမံကိန်းတွေဟာမြင့်မားတဲ့ resolution နဲ့ 450K video formats ကိုပိုမိုအသုံးပြုလာလို့ Studio FAMU ဟာအရွယ်ကြီးမားတဲ့သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်တယ်။ ဗဟိုမှချဉ်းကပ်မှုမရှိပါကအချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်တိုးပွားလာနေသောဗီဒီယိုမော်ကွန်းတိုက်များအလွန်အမင်းစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာသည်။
စတူဒီယိုသည်အဓိကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းစီမံကိန်းကိုစတင်သောအခါ၎င်းတို့သည်ဗဟိုမှသိုလှောင်မှုနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလွန်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုအထောက်အကူပြုသောစက်ရုံအတွက်ခေတ်သစ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့သည်။ FAMU သည်ဖိုင်များအလွယ်တကူရယူနိုင်ခြင်း၊ မြင့်မားသော resolution မီဒီယာပမာဏ၏အရွယ်အစားပမာဏကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းနှင့်စီမံကိန်းများရေရှည်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်မော်ကွန်းဖြေရှင်းချက်နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လိုသည်။ ထို့အပြင်သိုလှောင်မှုအသစ်သည်မီဒီယာဖိုင်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ဖိုင်များကိုမျှဝေရန်လွယ်ကူစေရန်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (MAM) စနစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အိုင်တီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ Agora PLUS ၏အကူအညီဖြင့်စတူဒီယို FAMU သည်အဆုံးမှအဆုံးသို့ရွေးချယ်ခဲ့သည် ကွမ်တမ် တစ် ဦး နှင့်အတူ StorNext ဖြေရှင်းချက် ကွမ်တမ် i500 တိပ်ခွေစာကြည့်တိုက် StorNext ဖိုင်စနစ်နှင့်အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ELEMENTS Media Library MAM နှင့်ပေါင်းစည်းထားသည်။
စတူဒီယိုသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဖိုင်တွဲများနှင့်တိုးပွားလာသောမော်ကွန်းတိုက်များသိုလှောင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်မြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်ကန ဦး PB PB ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထုတ်လုပ်ရန် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်မော်ကွန်းတင်ရန် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းစီစဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျောင်းသားများသည်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရန် StorNext ဖိုင်စနစ်တွင်သီးသန့်နေရာချထားပြီးပြီးပြီဖြစ်သောစီမံကိန်းများကိုတိပ်ဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။
StorNext ဖိုင်စနစ်နှင့် MAM စနစ်ဖြင့်ကျောင်းသားများသည်မည်သည့်စက်ကိရိယာမှမဆို - အိမ်၌ဖြစ်စေ၊ အရက်ဆိုင်၌ဖြစ်စေ - သူတို့၏အလုပ်ကိုဝင်ရောက်နိုင်သည်။ သူတို့ကဖိုင်တွေမြင်နိုင်တယ်၊ အပြောင်းအလဲတွေလုပ်နိုင်တယ်၊ ကြည့်ရတာလိုတဲ့တခြားလူတွေကိုသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေပြသနိုင်တယ်” ဟုŠejnohaကပြောသည်။ "ပါမောက္ခလည်းအဝေးမှအလုပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ flash drives တွေဒါမှမဟုတ် external hard drives တွေကိုပြောင်းတာထက်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ”
coronavirus ကပ်ရောဂါသည်ဥရောပသို့ရောက်သောအခါအလုပ်သို့အဝေးမှရောက်ရှိခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ "ကျနော်တို့ကရှိသည်ဖို့အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ် ကွမ်တမ် ဒီစိန်ခေါ်မှုအချိန်ကာလအတွင်းဖြေရှင်းချက်။ နှင့်အတူ ကွမ်တမ်“ StorNext ဖြေရှင်းချက်သည်ကျောင်းသားများ၊ ပါမောက္ခများနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌မျှမဝေမျှရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
အကြောင်းအရာကိုဗဟိုပြုခြင်းစတူဒီယို FAMU မှကျောင်းသားများသည်သူတို့၏အချိန်များစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရသောစီမံကိန်းများကိုကာကွယ်ရန်ကူညီသည်။ Scalar Extended Data Life Management (EDLM) စွမ်းရည်သည်နောင်လာမည့်နှစ်များအတွက်အချက်အလက်များကိုဆက်လက်ရရှိနိုင်ရန်ကူညီသည်။ ဤခေတ်မီချဉ်းကပ်မှုသည် Studio FAMU အားတသမတ်တည်းသောမူဝါဒများကိုအကောင်အထည်ဖော်စေသည်။ သိုလှောင်မှုသည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများသည်သိုလှောင်မှုကိုကျော်။ မရနိုင်ပါ။ StorNext ဖြေရှင်းချက်ဖြင့်ကျောင်းသားများသည်ဒေတာများကိုတစ်နေရာရာ၌ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိတော့အောင်သေချာအောင်လုပ်နိုင်သည်။ သူတို့တွေဟာအစစ်အမှန်ကမ္ဘာမှာလိုအပ်တဲ့သိုလှောင်မှုအပြုအမူရဲ့အရေးပါမှုကိုသိလာတယ်။ ”
Studio FAMU အတွက်ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ပါ။ www.quantum.com/en/resources/customer-success/studiofamu/
Scalar တိပ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန် www.quantum.com/en/products/tape-storage/
ကွမ်တမ် နှင့်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာထိုသို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက် - နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖောက်သည်ကိုဖမ်းယူဖန်တီးမျှဝေဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာကူညီပေးသည်။ ဒေတာဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဇာတ်စင်အဘို့တည်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ, ကွမ်တမ်'' s ကိုပလက်ဖောင်းအမြန်ဆုံး high-resolution ဗီဒီယိုစွမ်းဆောင်ရည်, ပုံများ, နှင့်စက်မှု IoT သည်။ ဒါကစမတ်အပေါ်အဘယ်ကြောင့်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများသည်, အားကစား franchise, သုတေသီများ, အစိုးရအေဂျင်စီများ, လုပ်ငန်းများ, မိုဃ်းတိမ်ပံ့ပိုးပေးကမ္ဘာတွင်ပျော်ရွှင်လုပ်နေပါတယ်, ဘေးကင်းများနှင့်ဖွင့် ကွမ်တမ်. ကွမ်တမ် Nasdaq (QMCO) တွင်စာရင်းဝင်ပြီး ၂၀၂၀၊ ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် Russell 2000®အညွှန်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ www.quantum.com/.
ယခင်: Teradek ၏ Bolt အသစ် 4K LT: 4K HDR မှစျေးသက်သာစွာဖြင့်သွားနိုင်သောလမ်းပေါ်တွင်စောင့်ကြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာ
နောက်တစ်ခု: Live Streaming အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော Verizon Media သည်ပလက်ဖောင်းစွမ်းရည်အသစ်များကိုစတင်ခဲ့သည်